i-All-rounder u-Simmonds usize i-SA Emerging inqobe okokuqala idlala ne-Sri Lanka
u-Kyle Simmonds uthole izinti ezimbili kwi-spell sama-runs amancane eshwiba futhi walandelisa ngama-runs awu-44 engaphumanga njengoba i-South Africa Emerging inqobe okokuqala ibhekene nabalingani babo i-Sri Lanka kumdlalo wabo we-One-Day Triangular e-Pitoli ngoMgqibelo.
Le-all-rounder yama-Northerns iphisane ngama-runs awu-35 kuma-overs akhe awu-10 njengoba izivakashi zigcine ku-247 kuphume abayisikhombisa.
Uphinde washaya o-six abathathu no-four ababili emabholeni awu-26 ukusiza iqembu lakhe linqobe ngezinti ezintathu kusele ama-overs ayisishagalombili agcwele.
Umphumela usho ukuthi iqembu lomqeqeshi u-Shukri Conrad linwebe indawo yalo njengelesibili, nokho ama-Sri Lankana, emuva kokuhlulwa okokuqala, basangaphambili kusele imidlalo eyodwa ukuthi idlalwe ngaphambi kwe-final ngeSonto.
Iqembu lase-Asia, elahlula i-University Sports South Africa (USSA) bedlala ngayizolo, futhi banqobe i-toss bakhetha ukushaya kuqala, baqale kahle ngokufika ku-80 kuphume oyedwa kuma-overs awu-13. Lokhu kube ngenxa yenhlanganiso yama-runs awu-78 ngenti yesibili phakathi kwa-Sandan Weerakkody (42) no-Pathum Nissanka (37).
Kodwa balahlekelwe izinti zilandelana kusukela lapho kwi-LC De Villiers Oval, bafika ku-140 kuphume abayisithupha nge-over yesi-33 emuva kokuthi u-Simmonds no-Dayyaan Galiem (2/25) bekhiphe izinti ezimbili. Kuthathe u-54 (55 balls, 3 fours, 1 six) oshaywe u-Ramesh Mendis ongaphumanga, ukubakhuphula kumphumela othegxagxa, nokwesekwa kuqhamuka ku-Lahiru Madushanka (30).
i-South Africa ibhekene nenkinga ngasekuqaleni njengoba kuphume izinti ezimbili kuma-overs okuqala esishagalombili – u-Janneman Malan (18) no-Raynard van Tonder (0) bobabili bakhishwe u-Amila Aponso (2/46). Kodwa u-50 oshaywe u-Matthew Breetzke uhole indlela, lomdlali ovulela ama-Warriors ngokushaya wathola u-53 (57 balls, 6 fours).
Futhi, nokho belahlekelwe izinti eziyisikhombisa, umphumela ubumncane ukuqhudelana ne-run rate. u-Breetzke, ehlangene no-Tony de Zorzi (30), u-Sinethemba Qeshile (37), u-Galiem (28) no-Simmonds, bakwazile ukunqobisa iqembu labo, ukunqoba obekubalulekile.
i-Pakistan ingaphambili kwi-series idlala ne-SA U19s u-Van Tonder utholela i-SA Emerging ukunqoba okukhulu Ukukholelwa endleleni okwenziwa ngayo, kusho u-Mahatlane i-Pakistan ingaphambili ngo-3-0 nokho u-Terblanche ethole ikhulu kwi-Youth ODI yesithathu u-Louw ufuna ama-SA U19s agxile kumoya weqembu kanye nezenzo kumdlalo wesithathu we-Youth ODI u-Khan no-Nazir beshaya babeka i-Pakistan ngaphambili ngo-2-0 kwi-Youth ODI series i-CSA imemezele imidlalo ye-SA U19s ngaphambi kwe-World Cup bedlala ne-India, i-Zimbabwe ne-New Zealand uParsons uzimisele ngokuhola njengesibonelo kuhambo lasekhaya bedlala ne-Pakistan i-CSA iluvumile uhambo lasekhaya ne-Pakistan, baqamba neqembu u-Mahatlane ugculisekile ngokufundiwe kuhambo lase-India u-Montgomery no-Molefe basiza i-SA U19s igcine uhambo ngendlela enhle